Tari-dia momba ny fibilaogiavana tsy mitonona anarana efa misy amin’ny teny Shinoa · Global Voices teny Malagasy
Tari-dia momba ny fibilaogiavana tsy mitonona anarana efa misy amin'ny teny Shinoa
Voadika ny 20 Janoary 2019 19:43 GMT
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny volana Marsa 2008)
Misaotra ny olona tsara fanahy iray izay indrisy fa tsy mety hitonona anarana velively, fa efa misy amin'ny teny Shinoa ankehitriny ny tari-dalana” “Anonymous Blogging with WordPress and Tor” nosoratan'ny mpiara-manorina ny Global Voices Online, Ethan Zuckerman, mitondra ny traikefa an-taonany maro amin'ny fampiarahana ny teknolojia amin'ny fikatrohana, tsy ho an'ny ampahan’ izao tontolo izao ihany, fa koa, ao anatin'ny 5MB, anaty fonosana tsotra natao manokana mba hozaraina.
Ho avy tsy ho ela amin'ity volana ity ny dikanteny amin'ny Blog for a Cause!, Taridalan'ny Global Voices momba ny Blog Advocacy, dingana manaraka lavorary ho an'ireo izay ho avy tsy ho ela—sy ireo izay efa manana—mba ho voaaro rehefa manao karazana asa an-tserasera. Toy ny amin'ny Anonymous Blogging, mety ilaina ny Adobe Acrobat Reade mba hijerena izany ary azo alaina maimaim-poana ato.
Teny farany nataon'i Ethan:
Raha tsy mila loatra hanafina anarana ianao dia aza manahy. Raha mifandray amin'ny teninao ny anaranao, dia mety haka tokoa ny teninao ny olona iray. Saingy misy olona sasany mila tsy mitonona anarana, ary izany no antom-pisian'ity torolàlana ity. Miangavy anao aho tsy hampiasa ireo teknika ireo raha tsy tena ilainao.
Aza misalasala azafady raha te-hanampy amin'ny fananganana ity tetikasa ity amin'ny alàlan'ny fandikana ny Blog for a Cause! na ny Anonymous Blogging amin'ny fiteninao manokana.